Ongororo dzemufirimu. Zvese nezvemafirimu akanakisa nevatungamiriri vazhinji, pamwe nekuona kwangu uye kutsoropodza maitiro evatambi.
Ngatikanganwei nezve wekupedzisira Robert de Niro kumutsa mumwe mutambi mukuru waaive pane imwe nguva. Zvinogona kuita sezvine hukasha asi zvakadaro, imwe yemhando dzinoshamisa dze celluloid yagara yapfuura nekusuwa kupfuura kukudzwa kwemafirimu pasina iyo poindi yekirasi cinema ...
Kubva pamudyandigere wake wegoridhe pazasi peLakers track, Jack Nicholson achiri kuratidza simba rinoshamisa iro raaigara achipa kune vatambi vake. Dudziro dzinoonekwa mune yatove kure uye psychedelic 70s kusvika zvakanaka kusvika muzana remakore rechiXNUMX. Kumhanya kusingaenzaniswi mune mukurumbira wanhasi...
Kana zvasvika pakuronga Matt Damon isu tinogona kuwana matambudziko. Hazvisi nyore kudaidza mukomana akaita saiye, anogona kupasa shamwari yako yehudiki yausingambofungidziri kutamba gamba remubhaisikopo uye kushoma moyo werudzi rweBrad Pitt. Uye zvakadaro…
Mutambi anounganidza zvinyorwa zvekududzira sekunge hunhu hwake hwechameleonic chimwe chinhu chiri nyore kuita. Pasina mubvunzo Jennifer Lawrence angafadza mukuru mukuru wekare saHitchcock. Nokuti mairi tinogona kuwana iyo isingatarisirwi kumashure iyo cinema inogara ichitsvaga sechinhu chinoshamisa. Chimwe chinhu…
Iwo matatu akanakisa mafirimu aLuis Tosar
Kune vatambi vakakwana vemhando ipi. Luis Tosar uye kusahadzika mupfungwa yayo yakafararira ndeimwe yeanonyanya kufadza kusangana muSpanish cinematography. Uye ndezvekuti mutambi weGalician uyu anogona kubatanidza uipi mune chero cheanomiririra; kana zvakasiyana, ...
Zvakaoma kufunga nezvaKeanu Reeves uye nekukasira kumuisa mune yakasarudzika mutambi stereotype. Zvingave nezvisarudzo zvake, zvichisundwa nezvido zvebasa kana zvakare, hongu, nekududzira shanduko, akanaka Keanu agara achizvivandudza nekukurumidza. Pamukomana uya ane foto yakavharwa inovhara ...
Iwo 3 akanakisa mafirimu eMario Casas
NaMario Casas chimwe chinhu chinoshamisa chinoitika kwandiri. Kune rumwe rutivi, ndinofunga kuti mutambi akanaka, asi kune rumwe rutivi, chimiro chimwe chete chinogara chichiratidzwa kwandiri, pasinei nebasa randinoita. Inofanira kunge iri nyaya yekuvapo kwake kana kuti inzwi rake rakaderera, sekuedza kuzevezera rake ...
Natalie Portman's Top 3 Movies
Pane chimwe chinhu chakaita serene melancholy muNatalie Portman's physiognomy. Kunyangwe chiri chinhu chakadzidzwa kana kuzvarwa, isimba kana sosi yakakwana kuita kuti hunhu huchinje kubva kunonoka kuenda kune kuputika zviri nyore. Zvese zvakaenzana mune yakanyatso girazi chivezwa kusvika ...
Kune vatambi vanonyangarika uye vanoonekwazve panguva isingatarisirwe. Zvakaitika naJohn Travolta, nekuda kweTarantino, mu "Pulp Fiction." Uye zvakaitika zvakafanana naJoaquin Phoenix muJoker, iyo yakanyanya acidic Batman villain yakambonyorwa. Mhedzisiro yakafanana, kutangazve kwekusimba kukuru kwekudengenyeka kwenyika…